News - Steven Oven with French Glass Bowl “Si se xing ye” (Waa dabeecad in la jeclaado waxyaabaha wanaagsan, laga yaabee cuntada), jacaylka cuntada ayaa ah raacdada aan dhamaadka lahayn ee bini-aadamka bilowgii.
Steam Foornada leh Foornada Muraayadda Faransiiska “Si se xing ye” (Waa dabeecad in la jeclaado waxyaabaha wanaagsan, laga yaabee cuntada), jacaylka cuntada ayaa ah raacdada aan dhammaadka lahayn ee bini-aadamka tan iyo bilowgii.
Steam Foornada leh Foornada Muraayadda Faransiiska “Si se xing ye” (Waa dabeecad in la jeclaado waxyaabaha wanaagsan, laga yaabee cuntada), jacaylka cuntada ayaa ah raacdada aan dhammaadka lahayn ee bini-aadamka tan iyo bilowgii. Maanta, markii noloshu sii kordheyso, cuntada dadka, dharka, iyo cuntada ayaa si weyn isu beddelay. Noocyada cuntada si joogto ah ayaa loo hodaniyaa. Farsamooyin kala duwan oo cunto karin ah ayaa lagu daray safafka karinta cunnada, oo keenaysa khibrado cusub oo ugub ah oo ku saabsan dhadhanka dadka.
Si kastaba ha noqotee, dadka casriga ah si indho la'aan ah iyagoo raadinaya macaan, xilliyo aad u tiro badan ayaa lagu daraa habka karinta cuntada. Sida laga soo xigtay tirakoobyada, Shiinuhu wuxuu cunaa celcelis ahaan 42.1g oo saliid ah maalintii, ku dhowaad laba-jibbaar heerka caafimaadka.
Sidee waxyeello u leeyihiin cuntooyinka dufanka badan?
Kolestarool xad dhaaf ah iyo dufan ayaa ku ururi doona darbiyada marinnada dhiigga, iyagoo keenaya arteriosclerosis, oo saameyn ku yeelanaya shaqada maskaxda, kordhinta dhacdooyinka cudurrada wadnaha, wadne xanuunka iyo cudurrada kale, iyo wixii intaa ka badan, si weyn u kordhinaya fursadda kansarka jirka. Cuntada iyo caafimaadka lama niyad jabi karo. Si loo xaliyo dhibaatadan, SHAO HONG waxay soo saartay taxane ah foornooyin mowjado caqli badan oo caqli badan. Taxanaha foornooyinka waxay dhexgalaan dubista, dubista, dubista, kululaynta, dhalaalida, nadiifinta iyo shaqooyinka kale si ay asal ahaan ula kulmaan baahiyaha maalinlaha ah ee jikada.
Qalabka aasaasiga ah ee foornada dubista, solayda hooseysa waxay ku habboon tahay dubista baalasha digaagga, lugaha digaagga, baradhada wan, kalluunka iyo hilibka kale. Hirarka iftiinka infrared 360-xawaaraha sare leh, dabaylaha duufaanka ah ee hilibka dubay, kuna qasbaya dufanka xad-dhaafka ah, hilibku waa mid jilicsan, macaan oo aan dufan lahayn. Pizza la dubay, tarta ukunta, shiilan faransiis ah, baradhada macaan iyo cunnooyinka kale ee caanka ah, shelf u hooseeya sidoo kale waa baahi. Kalasarka sare waxaa lagu dhejiyaa “giraan dherer” si loo dubo qaar ka mid ah cuntooyinka waaweyn, sida digaagga oo dhan la dubay.
Hawlgal dhakhso leh, tayo sare leh, xawaaraha karinta degdegga ah.
Kaliya digaaga in lagu kariyo foornada SHAO HONG waxay qaadataa 40 daqiiqo oo keliya, dhadhanka waxyeello uma geysato. Iyadoo la adeegsanayo hirar infrared light-360-xawaare sare leh oo duufaan ah si loo dubo cuntada, dhakhso, wax ku ool ah, isla markaana ay ku qasbi karto dufanka cuntada hilibka, runti waa inay lahaato qalabka jikada ee qoys kasta.
Foornada wax lagu karsado ee SHAO HONG, oo sidoo kale loo yaqaan "hawo faranjiye", qaar ka mid ah mashiinka hawada ee suuqa yaala waxay isticmaalaan digsi bir ah oo dahaaran, way fududahay in lagu dardar geliyo walxaha sunta leh heerkulka sare, oo dhaawac u geysta jirka. Foornada SHAO HONG waxay isticmaashaa daboolka kore ee muraayadda si buuxda u muuqata. Digsiga wax lagu dubo ee loo isticmaalo taxanaha dhamaadka sare waa muraayad quraarad ah oo laga soo dhoofiyo Faransiiska, waxayna leedahay xuquuqda iibka adduunka ee gaarka ah; digsiga dubista ee taxanaha dhamaadka-dhamaadka sidoo kale wuxuu ka samaysan yahay qalabka guryaha A-fasalka ah.
Qaabka hawlgalka ee foornada SHAO HONG sidoo kale waa la kala duwanaan karaa. Gudiga hawlgalka makaanikada wuxuu ku haboon yahay waayeelka, nooca smart-key wuxuu ku haboon yahay dadka caajiska ah ama kuwa cusub ee wax karinaya. Waxa kale oo jira taxane, kaas oo ah in la dejiyo "waqtiga, heerkulka, xawaaraha dabaysha" marka loo eego xaaladaha cuntada. Midkani wuxuu ku habboon yahay dadka jecel inay wax kariyaan oo xirfad u leh karinta. Si kastaba ha noqotee, SHAO HONG waxay leedahay cuntooyin ay ku siiso, kaliya ku xulo habdhaqanka qofka. Macno malahan nooca uu yahay walwal la'aan-iibka kadib!
Had iyo jeer waxaa la yiraahdaa in cuntada qurxinta badan ee adduunka aan laga xumaan karin. In kasta oo aadanaha casriga ahi ay si aan gabasho lahayn u daba-galaan suxuunta macaan, haddana waxay fiiro gaar ah u yeeshaan ilaalinta caafimaadka. Kooxda cilmi-baarista ee SHAO HONG waxay u hoggaansamaan fikradda ah "bixinta nolol tayo sare leh oo caafimaad leh" waxayna sii wadaa inay ku horumariso wadada hal-abuurka wax soo saarka. U isticmaal waqtigaaga firaaqada inaad ku raaxeysato khibrad nololeed cusub oo ay keeneen cunto tayo leh oo caafimaad leh.